Hamma hin jirree bookkisa Dullacha – Gubirmans Publishing
Posted on March 10, 2015 by bgutema
Gidduu kana gara Awaasaa kanaa dullachi Tigree adeemsa seenaa hin hubannee fakkaatu tokko Oromoon isuma Yohaannis arraba irraa cire sana se’ee farra Oromummaan yoo bookkisu dhagahame. Oromiyaan erga koloneeffamtee kaasee sochiin gara bilisummaatt Oromoon godhu hundi beekaa haa tahu wallaalummaan kanuma isee keessaa bahanii diinaaf ashkarummaa bulaniin hankaaffamaa yoona gahe. Oromoo uumaan waan itt bobaa’an hunda akka keessa hin deebi’amnee fi shafisaan hojii irra oolchuun beekamu. Akka loltuutt janna kumi gad hin qabne. Kanaaf koloneeffataan loltummaan madaqfachuuf isaan keessaa madaqfachuuf durfannoo kennaa. Duula keessaa fi alaaf Oromo irratt utuu hin hafin kan hiriirsu caalaatt jaruma akkasiitii. Garaa guuttannaan kan ajajaman hojii irra yoo oolchan aadaa fi seera safuu akaakilee saaniillee kan dagatan hedduu dha. Kan dur “garbicha abbayyee” jedhanii dhaadatan amma” garbicha abaluu” jedhanii maqaa kan isaan bulchuun dhaadachuutu boonsaa taheefii.
Qabasaawoti farra kolonii tahan tokko tokko galtoota diinaan itt bobbaafaman ilaaluun Oromoo” akka gabbistuu humna koloneeffatuutt ilaalu. Si’ana kanneen diina tajaajilutt qaana’an lakkofi saani guddataa jira. Barri Oromoon hoomaan diinatt buluuf gara mooraa saatt girrisan dur hafe. Faarrri jiru humnoota bilisummaaf tumsuun ummata hacuuccaa jala jiru aangessuu dha. Sochiin bilisummaa Kallacha qabsoo saa ABOn eegalame lafa Oromiyaa qofa utuu hin tahin sammuu diinaan dhiqame bilisoomsuu dabalata. Hanga kan surriin faalame jiranitt Oromiyaan bosona abbaan fedhe soma waraanaa keessaa muratu taatee hafti. Kanaaf yeroo dhaaba diinni maqaa Oromoon ijaare yaadannu kun irraanfatamuu hin qabu. Lammii ofii joonjessaa keessatt dhiisuun ofii qaanii tullachuu taha. Dhaabi diinaa eenyummaa saaniin akka wal hin gitne guyyuu itt himuu dha. Kan gooftaan salphisett dabalanii soqoluu fi abaaruun sabichaaf bu’aa hin qabu. Kan tarkaanfatooti yaadan akka sanatt ta’uu qaba. Tarkaanfatummaan dhuunfaa gita tokkoo yk gola tokkoo miti; murannoo abba abbaa yk murnootaa jireenya hundaa keessaa babahanii jijjiiramaa hawaasaa wayyeessuuf ijaajjani. Dhoofsisi ni dandahama taha, garuu kaayyoon sabichaa dhoofsisa keessa hin galu.